खेलकुद – Page 8 – SamajKhabar.com
काठमाडौं । विश्वकप फूटबल प्रतियोगिताअन्तर्गतको क्वाटरफाइनल खेल भोलि शुक्रबारदेखि शुरु हुने भएको छ । रसियामा जारी उक्त प्रतियोगिताअन्तर्गत शुक्रबार दुई खेल हुनेछन् जसमा पहिलो खेलमा नेपाली समयअनुसार ७ः४५ बजे उरुग्वेले फ्रान्सको सामना गर्नेछ भने दोस्रो खेल राति ११ः४५ बजे ब्राजिल र बेल्जियम....पुरा पढ्नुहोस
रोनाल्डो युभेन्टस जाने !
मड्रिड । क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई रियाल मड्रिडले एक सय मिलियन युरोमा इटालियन च्याम्पियन युभेन्टसलाई बिक्री गर्ने भएको छ। रियालले युभेन्टसको उक्त प्रस्ताव स्वीकार गर्ने भएको छ। म्यानचेस्टर युनाइटेडबाट सन् २००८ मा ८० मिलियन पाउण्डमा रियालमा अनुबन्धित रोनाल्डोले क्लवबाट पाँच च्याम्पियन्स लिगको....पुरा पढ्नुहोस
होण्डाले लिए सन्यास
टोकियो । जापानका केइसुके होन्डाले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट संन्यास घोषणा गरेका छन् । सोमबार राति जापान विश्वकपको अन्तिम १६ को नाटकीय खेलमा बेल्जियमसँग पराजित भएपछि होन्डाले यस्तो निर्णय गरेका हुन् । ३२ वर्षे होन्डा बेन्चबाट मैदानमा छिरेको खेलमा दुई गोलले पछाडि परेको बेल्जियमले ३–२ ले नतिजा....पुरा पढ्नुहोस
अर्जेन्टिना विश्वकपबाट बाहिरियो, मेस्सीको भविष्य के ?
मस्को । पुर्वविजेता फ्रान्स विश्वकप फुटबलको क्वाटरफाइनल पुगेको छ। नकआउट चरणको पहिलो खेलमा फ्रान्सले साविक उपविजेता अर्जेन्टिनालाई ४-३ गोलले हरायो। फ्रान्सको जितमा केलिन एमबाप्पेले दुई तथा एन्टोइन ग्रिजम्यान र बेन्जामिन पाभार्डले एक एक गोल गरे। अर्जेन्टिनाका सर्जियो एगुएरो,एन्जेल डी मारिया र....पुरा पढ्नुहोस
अर्जेन्टिना भर्सेज फ्रान्स : कसले मार्ला बाजी ?
काठमाडौं। शनिबार विश्वकपमा नकआउट चरणका खेलहरु सुरु हुँदैछन्। नकआउट चरणको पहिलो खेलमा अर्जेन्टिना र फ्रान्सको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। नेपाली समयअनुसार बेलुका पौने ८ बाट यी दुई टोलीको बीचमा प्रतिस्पर्धा सुरु हुनेछ। यो अन्तिम १६ को यो यी दुई टोलीबीचको प्रतिस्पर्धा निकै रोमाञ्चक हुनेछ। समुह....पुरा पढ्नुहोस
डिफेन्डिङ च्याम्पियन जर्मनी बाहिरियो, स्विडेन र मेक्सिको अन्तिम १६ मा
रसिया । २०१८ फिफा विश्वकप प्रतियोगितामा डिफेन्डिङ च्याम्पियन जर्मनी समूह चरणबाटै घर फर्किएको छ। बुधबार भएको समूह 'एफ' को महत्वपूर्ण खेलमा दक्षिण कोरियासँग २-० गोलले पराजित भएपछि जर्मनी समूह चरणबाट बाहिरिएको हो। कोरियाले दुवै गोल दोस्रो हाफको इन्जुरी टाइममा गरेको थियो। किम योङगवनले इन्जुरी टाइमको....पुरा पढ्नुहोस
क्रोयसियासंगै अर्जेन्टिना दोस्रो चरणमा प्रवेश !
काठमाडौँ । विश्वकप फुटबल अन्तर्गत समुह डी बाट क्रोसिया र अर्जेन्टिना दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छन् । मंगलबार राति भएको खेलमा क्रोसियाले आइसल्याण्डलाइ २-१ गोल अन्तरले पराजित गर्दै समुह डी मा शिर्ष स्थानमा रहदै दोस्रो चरणमा पुग्यो भने अर्जेन्टिनाले नाइजेरियालाई २-१ गोल अन्तरले पराजित गर्दै समुहमा....पुरा पढ्नुहोस
पेरुको सान्त्वना जित
सोची — आन्द्रे कारिलोको सनसनीपूर्ण ‘भली’ गोलको सहयोगमा पेरुले विश्वकपमा मंगलबार अस्ट्रेलियामाथि २–० को जित रचेको छ । यसअघि नै समूह चरणबाटै घर फर्किने पक्का भएको पेरु ३६ वर्षपछि विश्वकपमा फर्किएको थियो । यस्तोमा उसका कप्तान पाउलो गुइरेरोले पनि सोचीमा गोल गरे । गुइरेरोले नै कारिलोका लागि १८ औं....पुरा पढ्नुहोस
अर्जेन्टिनाको भविष्य के होला ?
रसिया । विश्वकप फुटबलमा आज विभिन्न ४ खेल हुँदैछन् । समूह सी अन्र्तगतका अष्ट्रेलिया र पेरु तथा डेनमार्क र फ्रान्सबीचको खेल राती पौने ८ बजे सुरु हुनेछ । यस्तै समूह डी अन्र्तगत आईसल्याण्ड र क्रोएसिया तथा नाईजेरिया र अर्जेन्टिना बीच मध्यराती प्रतिस्पर्धा हुनेछ । समुह सी : अष्ट्रेलिया र पेरु रसिया....पुरा पढ्नुहोस
नकआउट चरणमा पोर्चुगलको भेट उरुग्वेसँग, स्पेनले रसियासँग खेल्ने
बिश्वकप फुटबलको प्रिक्वाटरफाइनलमा उरुग्वे र पोर्चुगल तथा स्पेन र रसिया भिड्ने भएका छन् । समुह बी अन्र्तगत मध्यराती स्पेन र मोरक्कोले २–२ तथा पोर्चुगल र ईरानले एक एक गोलको बराबरी खेलेपछि समुह बीबाट नकआउट चरण पुग्ने टोलीको टुंगो लागेको हो । समुह ए बाट सतप्रतिशत नतिजासहित उरुग्वे समुह विजेता र रसिया....पुरा पढ्नुहोस